Hevitra MPANOHARIANA | Desambra 2010 |
Raharaha FPVM Antaninanandrano tohiny
2010-12-26 @ 23:36 in Finoana
Efa mandeha siosio eny ihany ny resaka momba izay nitranga tao amin'ity toerana iray ity. Ireto indray aloha no azo marihina:
Voalohany, tsy ny collectif GTT no nahita ity resaka ity voalohany raha ny tamin'ny aterineto no resahina. Efa andro vitsivitsy taty aoriana aho vao nahatadidy fa efa nisy ny mpamaham-bolongana (jereo Zouboon) avy any Mahajanga niresaka momba azy ity tamin'ny 7 desambra 2010. Efa nanontany ny mpanoratra aho tamin'io daty io hoe afaka milaza ny toerana ve izy saingy tsy namaly mivantana. Ny Collectif GTT kosa dia tapabolana taty aoriana vao namoaka mihitsy ny ampahan-dahatsary izay efa nosoratan'ny mpamaham-bolongana voatonona etsy ambony nilaza fa naharitra iray ora sy sasany (ny ora iray ihany no hitantsika). Hita tsipalotra ihany anefa fa efa nisy sahady ny fanamboarana ny fandaharana ny fandehan'ny tantara raha tarafina ny nitantaran'ilay mpamaham-bolongana azy. Angamba tsara kokoa raha manontany izay nahita ny "lahatsary iray manontolo" ny niafaran'ny tantara isika izay liana amin'izany.
Faharoa, rehefa nahita ny lahatsary indray ny collectif GTT dia toy ny nampifandray azy tamin'ny resaka politika. Ilay izy somary niaro ny filoha voafidim-bahoaka teo aloha no tena nampafana ny adihevitra sy nielezan'ilay lahatsary haingana kokoa, indrindra fa ho an'izay niserasera. Azo heverina izany fa nanana ny tanjony ny namoaka azy ho VCD izay nahitana ny fiparitahany tany Mahajanga ary tsy mitovy tamin'izany tanjona izany kosa ny an'ny collectif GTT na dia naka "sombiny" tamin'ilay tantara aza. Ny iraisan'ny roa tonta kosa anefa dia ny fanalana baraka ny FPVM.
Ankoatra izany kosa dia mba niezaka nikaro-baovao araka izay azonay natao izahay ary dia zaraina aminareo izay voaangona tamin'izany fikaroham-baovao izay:
Isika dia namakivaky izay voasoratra any amin'ny dinika isan-karazany any. Tsy maintsy mikaroka izay olona mety ho fantatra tao anatin'ilay lahatsary. Nisy tokoa ny nahita an'i Ta... izay mpihira ao amin'ny tarika evanjelika iray antsoina hoe Me... avy ao amin'ny fiangonana FJKM Ambalavao Isotry. Ny forum no nahitako fa mpiasa voaroaka na niala tao amin'ny vondron'orinasa tiko io Ta... io ary efa lasa mpitarika tanora tao amin'ny FPVM. Notadiavina ny fanamarinana hoe efa lasa ao amin'ny FPVM tokoa ve io mpihira ao amin'ny tarika Me... io? resaka an-jorom-bala tsy avy amiko fa notaterina tamiko ary somary namboarina fa ny hevitra nampitaina no notandrovina (mpiandry tao ihany no nanontaniana):
__ Mahalala mpihira ao amin'ny tarika Me... miangona ao amin'ny FPVM ve ianao?
__ Tsy mahafantatra afa-tsy Ta... ihany aloha aho
__ Nanatrika izany fandroahana devoly nisy fanaboridanana olona izany ve ianao?
__ Tsy nahita izany aho fa mpiara-mivavaka tamiko no efa niresaka fa nisy, hono, izany! Fa ahoana no nahalalanao izany?
__ Efa malaza amin'ny aterineto anie izany e!
__ Efa nahare ilay izy aho fa tsy fantatro hoe hay efa nandeha tamin'ny aterineto io resaka io.
Hatreo ihany ny soratako aloha dia anjaran'ny tsirairay no mino na tsia izay soratako, anjaran'ny tsirairay no mamoaka tsoa-kevitra. Mety mbola hisy tohiny hatrany angamba ity raharaha ity nefa asa aloha!!!
Jentilisa 27 desambra 2010 tamin'ny 01:37
Sombin-tantaran'ny Lapan'ny tanÃ na sy sombin-tantaran'i Madagasikara